Shina Abstract Sculpture Shina ho an'ny orinasa mpivarotra sy mpanamboatra | Piedra
Zavamaniry any Abstract Sculptures amidy
Modely Tsia: MES62
Te hanana sary sokitra maoderina iray ve ianao? Ireo sary vongana zaridaina abstract amidy dia lasa malaza eto an-toerana sy any ivelany. Azonao atao ny manamboatra endrika, habe, mamaritra ary loko arak'izay tianao. Ny kalitaonay dia nahatratra ambaratonga avo izay nahazo hevitra tsara avy amin'ny mpanjifa taloha. Ary araky ny fantatry ny rehetra dia sarotra ny mametraka lamina an-tany voalohany, fa ny zava-drehetra dia misy fanapahan-kevitra voalohany. Ho gaga ianao amin'ny kalitaonay sy ny serivisy aorian'ny fiaraha-miasa voalohany. Tena mino an'izany izahay. Aza misalasala mifandray aminay amin'ny sales1@brandsculptures.com raha mahaliana amin'ny sary sokitra ianao.
Sary sokitra vita amin'ny metaly miloko vita amin'ny mahazatra
Eny, Logo dia mety ho sokitra tamin'ny laser, namboarina / namboarina tamin'ny bobongolo sns.
Tokony ho 10 andro
Manodidina ny 25-30 andro eo dia miankina amin'ny habetsaky ny toe-javatra sy ny maodely
Haingo an-trano, fanomezana, fanangonana zavakanto, haingon-trano zaridaina, haingon-trano, tokotany an-tokotaniny, firavaka amin'ny birao,
haingon-trano, haingon-trano haingon-trano, sns.
Fonosana poavra nasiana tombo-kase
Ny sary dia ny hampisehoana fotsiny ny fahaizantsika manamboatra vokatra. Azonao atao ny matoky ny hatsarantsika
Amboarina, sokitra, sanding, polishing na sary hosodoko na Chromed eo amboniny
Ampahafantaro ny orinasanay
1.Mihoatra ny 10 taona ny fanaovana sary sokitra sy ny traikefa fanondranana
Ny orinasa voalohany dia natsangana tamin'ny 2006. Mpanamboatra matihanina izahay miaraka amin'ny teknolojia vy vy vita amin'ny vy tsy fantatra, ary ny fizotran'ny famokarana dia anisan'ireo avo indrindra eto an-tany.
2.Ny mpanjifa aloha
Manaraka ny serivisy miompana amin'ny mpanjifa ny orinasanay
Izahay dia manao sary sokitra araka ny foto-kevitry ny mpanjifa, ary manaja ny famolavolana sary sy ny sary sokitra. Manantena izahay fa hametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ny mpanjifa.
3.Marka manondrana voalohany:
Inona no vokatra azonao vokarina?
Previous: Sary sokitra ivelany ho an'ny fampirantiana
Manaraka: Sary sokitra vy misy jiro LED
Sary sokitra ivelany momba ny haingon-trano
Sary vita amin'ny sary miloko fitaratra vita amin'ny Endrika ...
Sary sokitra zaridaina vita amin'ny metaly metaly metaly sokitra ...
Sary sokitra vy ivelany amidy